Nyaya kana iri ku court, iri ku court. Ipayi court nguva yayo iite basa. Tavanema courts mangani muno muZimbabwe?. Iwomahuman rights organisation iwaya anofanirwa kubhanwa kana achi interfere me court decision.
Kodzero dzevakadzi ngadzimiririrwe nevakadzi varimudzimba (vakaroorwa)
"Ane kamuromo kanenge kapikiri, kanongoramba kachingobairira", Evangelist PD Chiweshe.
Haiwawo imi munoiwanepi nguva yekungopesuka nenyaya yaMary Mubaiwa? Basa kushenaira nezvisina basa. Musade kudenha General Chiwenga wakazvinyararira havo. Kangani kamakanzwa vachitaura since Mary started her mercy seeking campaign. Batsirai vari kutambura chaivo or kutobatsira Mai Munangagwa vari kutombozama kubatsira vanhu across the country. At least she has people vanototi ichi takaitirwa naMai Munangagwa ko iye Mary anaani waakamirira or kubatsira panguva yake. Kana Dr Amai chaivo vane a lot of people she helped during her time. ZveTsvarakadenga iyi ka, musade kudenha General Chiwenga kana kuda kusvibisa zita raPresident ED.
Hamuna kunzwa here na Mary wacho kuti Chiwenga haateerere President. Anoita zvaanoda. Nekuti hanzi Generari ndivo vakaita kuti President Mnangagwa vaite President pavaka dzingwa naMugabe. Zvakaoma.
Regai zvakadaro ngavarapane muno hanty mune ma doctors here,,,ko asi zvipatara zvemuno hazvirape here,,,tingashayewo one best muno ,,,so Tiri kuendepi kana tichiti arwara anoenda kunze for best medical treatment ,,#chavakadya chamuka aifanira kugara nemurombo vake Shingi,,, maybe ingadai iri happy family
Vakadzi avo Havana rimwe BSA rekuita hr. Ngavauye kumunda kwangu vaswere vachisakura. Sei pasinawo vanomiririra isu varume. Paaida kuuraya VP maivepi. Ko paakadumber shingi makadii kuita kaindaba kenyu ikako. Majaira kufurirana kuchinjanisa varume. Mune varume hr Imi kna kut makatosiyawo venyu
Kkkkkkkkkkk @ Shadows
Psychiatrist examination outcome not followed
Physician examination outcome invalid n useless where there is a psychiatrist examination outcome.
ISRAEL RUBBAL JOHNSON LAMBERT TIGERE MAPURANGA 5 months ago
Haaa izvi zvazonyanya, Chiwenga akuAbuser maPowers ake pasiripo.